Mayelana NATHI - Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd.
Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngamanani akhethwayo nezinsizakalo zekhwalithi
Kube khona kusukela ngaleso sikhathi 1996,Gxila ekukhiqizeni ingubo
ukwethembeka, ukugxila kumakhasimende, okugxile ezimakethe, okusekelwe kubuchwepheshe, ukuqinisekisa ikhwalithi.
Inkampani yeSu Xing itholakala edolobheni laseChangzhou, esifundazweni saseJiangsu, eChina. Kuyibhizinisi elihlanganisa ukukhiqizwa nokuhweba. Isungulwe ngo-1992, inkampani manje isinomnikazi weChangzhou Suxing ingubo Co., LTD Hubei Suxing ingubo Co., LTD Changzhou Suxing ingubo Co., LTD Le nkampani inezintambo zokukhiqiza eziyi-10, abasebenzi abangaphezu kuka-580 nokuthengisa minyaka yonke okungama- $ 55 million. Ngo-2012, iNkampani yasungula iHubei Suxing Garment Co., LTD
Le nkampani ibhizinisi elikhulu kakhulu lokukhiqiza izingubo endaweni yaseLiangzihu, Ezhou City, esifundazweni saseHubei. Inabasebenzi abangama-980 kanye nolayini bomhlangano abangama-31, ngenani lonyaka lokukhipha lamaRandi ayizigidi ezingama-30. Inkampani yeSu Xing inamathela ebukhali, ubuqotho befilosofi yebhizinisi, iminyaka eminingi ngabalingani abakhulu ababhalwe ohlwini. Sekuyibhizinisi eliholayo le-changzhou ne-Hubei amabhizinisi endawo engubo. Izitifiketi eziningi, isitifiketi sasekhaya se- "ISO9001", isitifiketi saseMelika "Packaging (iGlobal Garment Production Responsibility), isitifiketi se-RCS, isitifiketi se-RDS, isitifiketi sesiteshi sesilawuli kude, i-HIGG SLCP, njll. Inkampani ye-Suxing nayo ibalwa njenge" ibhizinisi eliphambili lezimboni "," Ukuhweba okuthuthukile kwamazwe angaphandle okuthekelisa ibhizinisi "," Ubuqotho bekhwalithi yamabhizinisi amaShayina "," Changzhou Garment Industry Association "usekela sihlalo wenkampani njalonjalo.
A: Ukuqala iphrojekthi yakho, sicela usithumelele imidwebo yokuklama ngohlu lwezinto ezibonakalayo, ubuningi nokuqeda. Ngemuva kwalokho, uzothola ikhotheshini evela kithi kungakapheli amahora angama-24.
Q: Asijwayele ukuthuthwa kwamazwe omhlaba, ngabe uzosingatha yonke into ephathekayo?
A: Impela. Isipiliyoni seminyaka eminingi nokudlulisa phambili okusebenzisana isikhathi eside kuzosisekela ngokugcwele kuso. Ungasazisa kuphela usuku lokulethwa, bese uzithola izimpahla ehhovisi / ekhaya. Okunye ukukhathazeka kusishiya.
Q: Kuthatha Isikhathi esingakanani Ukwenza Isampula?
A: Imvamisa isampula ye-proto ithatha ama-3days, ngoba isampula le-sms lithatha ama-7-10days.